ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကို Follow | ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကမ္ဘာ့အဆင့်မီဒူဘိုင်းရဲ့လမ်းညွှန်နှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဇာတ်လမ်းကယ်တင်တတ်၏။ ကျနော်တို့ရှေ့ဆက်-စဉ်းစားတွေးခေါ်စျေးကွက်လူမှုမီဒီယာပရိုမိုးရှင်းတွေနဲ့စိတ်ကူးများအများကြီးနဲ့ဖန်တီးမှုကုမ္ပဏီဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတန်ဖိုးကိုမောင်းထုတ်ရန်လူမှုရေးထိုးထွင်းသိမြင်မှု၏တန်ခိုးကိုယုံကြည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ - Facebook မှာ
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ - တွစ်တာ
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ - Pinterest
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ - Instagram ကို
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ - Angel.co
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ - Behance
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ - Youtube ကို
နှုတ်ထွက်: ယောဘကိုရှာဖွေခြင်း & ဗီဇာ
ပွဲချင်းပြီးပေါ်မှာ right ပြန်အမ်းမရှိဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးတယ်။
CV တင်ပါ: ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ
အခုဆိုရင်: သင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှအခမဲ့ CV ကို upload တင်လို့ရပါတယ်
အမှု၌သင်တို့တစ်ဦးကငွေရှိသည်မဟုတ်သလဲ? သင်တို့သည်ငါတို့၏အဖွဲ့သည်ရန်သင့် updated CV ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်:
resume@dubaicitycompany.com ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သင့်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်လည်းနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအားဖြင့်သင်တို့ကို Message ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။
office@dubaicitycompany.com ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြမှာကြည့်ရှိသည်နှင့်3ရက်အတွင်းပြန်သင်ရလိမ့်မယ်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ထောင်စုနှစ်မူပိုင်အက်ဥပဒေပေါ်လစီ - DMCA
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ - ပေါ်လစီ
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အအခြေအနေ - စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
ဆက်သွယ်ရန် - ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီသင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းဖြစ်သည်!
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့အကြှနျုပျတို့ကိုကိုဆက်သွယ်ပါ။ ကွောငျ့ ဒူဘိုင်းမြို့ ကုမ္ပဏီဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအသင်း။ ကျိန်းသေသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည်။ သငျသညျကိုဆက်သွယ်လိုလျှင်။ အဆိုပါငှားရမ်းကိုယ်စားလှယ်များတစ်ခုမှာ။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌အကြှနျုပျတို့၏ကုမ္ပဏီအီးမေးလ်ကိုသုံးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအစဉ်အမြဲအလုပ်ရှာဖွေသူများကြိုဆိုသည်။ ဒူဘိုင်းတွင်ပိုမိုမေးခွန်းများနှင့်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့, ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးပါ။ သငျသညျအရှေ့အလယ်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေတဲ့အထူးသဖြင့်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့ကအမြဲအသစ်အအသုံးပြုသူများကြိုဆိုကြသည် တစ်ဦး updated ကိုယ်ရေးရာဇဝင် post။ ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းတစ်ဦးဦးဆောင်အလုပ်ရှာဖွေနေအတိုင်ပင်ခံအေဂျင်စီဖြစ်ရည်မှန်းထားပါသည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီလုပ်သားများကိုရှာဖွေစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများမှကူညီ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အလုပ်ရှာဖွေသူများအသက်မွေးဝမ်းအတူလုပ်ကိုင်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်အလုပ်အကိုင်အဖြေရှင်းနည်းများကိုဖေါ်ထုတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ယူအေအီးအတွက်ပြည်တော်ပြန်များအတွက်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်မှန်းချက် fit ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျရှာနေရှိမရှိ စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အကိုရှာဖွေရန်။ တောင်မှအလွန်အမင်းကျွမ်းကျင်အရောင်းအနေအထားသို့မဟုတ်ပင် ဘဏ်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများ။ နည်းပညာနှင့်ဥပဒေရေးရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ အဖြစ်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အခွင့်အလမ်းများ။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကိုသင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ လမ်းတိုင်းခြေလှမ်းနှင့်အတူ။
အမှန်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာကူညီပေးနေသည်။ ဒီစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်နိုင်သည်ပေမယ့်။ သို့သော် 1Million ထက်ပိုသောအလုပ်သည် visitors ည့်သည်များကိုရှာဖွေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကိုဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်တစ်ခုရှာရန်ဂရုပြုခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလုပ်ရှာဖွေခြင်းကိုတင်နေသည် ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်လမ်းပြ ဒူဘိုင်းမှာ။ နေဘယ်နေရာမှာနေနေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည့်ပါ ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အဒူဘိုင်းဘလော့။ ထိုအခါရလဒ်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေကုမ္ပဏီနှင့်အတူဒူဘိုင်း၌သင်တို့၏အိပ်မက်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေပါ။ သူတို့အခွအေနမြေိုးကျနော်တို့အသေးစိတ်လမ်းညွှန် wringing နေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်တတ်နိုင် ဒူဘိုင်းအတွက်စုဆောင်းဖို့ CV ကို upload။ အဘယ်သို့မှထွက်ရှာတွေ့ ပင်လယ်ကွေ့အလုပ်အကိုင်များများအတွက်အဆက်အသွယ်ကုမ္ပဏီများမှ။ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အတွက်အားလုံးမညျပိုမိုမြင့်မားသည်သင်၏အခွင့်အလမ်းတွေကို။